२०७४ माघ ३ बुधबार, वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अफ्रिकी देशबारे गरेको सम्बोधनलाई लिएर आफूलाई गलत पुष्टि गर्ने प्रयास भएको मङ्गलबार बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
मिटिगा विमानस्थल आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या बीस पुग्यो
२०७४ माघ २ मंगलबार, त्रिपोली । लिबियाको राजधानीमा रहेको एक मात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार लडाकूले आक्रमण गरेपछि सुरक्षाकर्मी र आतङ्ककारीबीच भएको झडपमा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या २० पुगेको छ । यस आक्रमणमा परी अन्य ६३ जना घाइते भएका छन् । ... बाँकी अंश»
लिबियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा नौ जनाको मृत्यु
२०७४ माघ १ सोमबार, त्रिपोली । लिबियाको राजधानीमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार लडाकूहरुले आक्रमण गरेपछि भएको झडपमा परी नौ जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
अमेरिका - कोरिया वार्ता सहजिकरण गर्न रुस तयार छ : विदेशमन्त्री सेर्गेइ
२०७४ माघ १ सोमबार, मस्को । रुसले संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच वार्ता भएमा त्यसको सहजिकरणका लागि तयार रहेको बताएको छ । रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभरोभले भने– यदि अमेरिका र कोरियाबीच वार्ता हुन्छ भने छ देशको प्रारुपभित्र रहेर सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । ... बाँकी अंश»
२०७४ माघ १ सोमबार, सोल । आगामी महिना दक्षिण कोरियामा आयोजना हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिक खेलको तयारीका लागि उत्तर र दक्षिण कोरियाको बैठक दक्षिण कोरियामा सोमबार सुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»
झारखण्डमा घातक सवारी दुर्घटनाः १२ जनाको मृत्यु
२०७४ माघ १ सोमबार, राँची । भारतको राँची–गुमला नेशनल हाइवे–४३ मा भएको सवारी दुर्घटनामा १२ जनाको ज्यान गएको छ । ... बाँकी अंश»
पेरूमा ७.२ रेक्टर स्केलको भूकम्प, २ जनाको मृत्यु, १७ सम्पर्कविहीन
२०७४ पौष ३० आइतबार, लिमा । पेरुको सामुद्रिक क्षेत्रमा आइतबार गएको भूकम्पमा परी दुईजनाको मृत्यु भएको पेरुका अधिकारीले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
२५ वर्षपछि इजरायली प्रधानमन्त्री भारतमा, मोदीले हाले अँगालो
२०७४ पौष ३० आइतबार, नयाँ दिल्ली । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु छ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार भारत आइपुगेका छन् । नेतान्याहुको स्वागतका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयम विमानस्थल पुगेका थिए । मोदीले नेतान्याहुलाई स्वागत गर्दै अँगालो हालेका थिए । मोदी छ महिना अघि इजरायलको भ्रमणमा गएका थिए । मोदी इजरायलको भ्रमणमा जाने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री हुन्। ... बाँकी अंश»
इयूले ब्रेक्जिटका बिषयमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्यो : वेलायती अर्थमन्त्री ह्यामण्ड
२०७४ पौष ३० आइतबार, बर्लिन, जर्मनी । वेलायतका अर्थमन्त्री फिलिप ह्यामण्डले ब्रेक्जिटका बिषयमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भनी यूरोपेली सङ्घ (ईयू) को आलोचना गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
'दुई कोरिया तयार भए प्रायद्वीपको तनाव समाधान असम्भव छैन'
२०७४ पौष ३० आइतबार, प्योङयाङ, उत्तर कोरिया । दुई कोरियाबीच भएका पछिल्ला वार्ताले यदि दुवै मुलुक समस्या समाधानका लागि तयार भएमा समाधान असम्भव नभएको पुष्टि गरेको शनिबार उत्तर कोरियाले बताएको छ । ... बाँकी अंश»
ओबामाले सुधारेको सम्बन्ध किन सहज बनाउन सक्दैनन् ट्रम्प
२०७४ पौष २९ शनिबार, काठमाडौं । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्ना क्युबाली समकक्षीसँग अङ्गालोमार्दै भनेका थिए – अमेरिका र क्यूबा एक अर्काको सहयोगी बन्नेछन् र मित्रताको व्यवहार गर्नेछन् । ... बाँकी अंश»
भारतीय सेनाध्यक्ष भन्छन् 'चीनसँग लड्न नेपाललाई हात लिनु जरुरी छ'
२०७४ पौष २८ शुक्रबार, काठमाडौं । भारतको स्थल सेनाध्यक्ष विपिन रावलते चीनसँग युद्ध गर्नको लागि भारतले आफ्ना छिमेकीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बढाउनुपर्ने जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २८ शुक्रबार, नयाँ दिल्ली । भारतले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गरेको समाचारमा जनाइएको छ । भारतले ३१ वटा भू–उपग्रहसहितको रकेट आन्ध्र प्रदेश राज्यबाट अन्तरिक्षतर्फ पठाएको बताइएको छ । ती रकेटमा भारत बाहेकका अरु विभिन्न छ वटा देशका भूउपग्रह पनि रहेका समाचारमा जनाइएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २८ शुक्रबार, काठमाडौं । ४ जना न्यायाधीसले चर्काे विरोधगरेसँगै भारतको सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस संकटमा परेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २८ शुक्रबार, काबुल । अफगानिस्तानमा सन् २०१७ मा कम्तीमा पनि २० जना सञ्चारकर्मी मारिएका समाचारमा जनाइएको छ । ‘अफगान जर्नालिस्ट सेफ्टी कमिटी (एजेएससी) र इन्डिपेन्डेन्ट् मिडिया सेफ्टी गु्रप प्रोटेक्टिङ्ग द रिपोर्टरस् राइट्स्’ ले शुक्रबार सो विषयमा जानकारी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २८ शुक्रबार, काठमाडौं । ‘महिनावारी भएको हो ? लौ नदी तर्न पाइन्न !’ यस्तो कडा उर्दी २१ औं शताब्दीमा लागेको सुन्दा कस्तो लाग्छ ? यथार्थ तीतो हुन्छ । भएको त्यही छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २७ बिहिबार, बेइजिङ । दुई कोरियाका बीचमा मंगलबार उच्चस्तरीय वार्ता भएकोमा भारत र चीनले स्वागत गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २६ बुधबार, काठमाडौं । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको खाक्रो नारा भजिँदै आएको भएपनि राज्य संयन्त्रले नै यसलाई निमोठ्न लगाएको आभास समयसमयमा हुने गरेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २६ बुधबार, लाहोर। एउटा समावेशी र स्थिर राजनीतिक प्रणाली विकास गर्नेतर्फ पाकिस्तानको प्रगति सुस्त थियो नै झन सन् २०१७ को उत्तरार्धतिर नयाँ समस्याहरुको सामना गर्नुपर्‍यो। यो स्थितिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिका हालका ट्वीटहरुले अझ खराब बनाउन सक्छ। यदि पाकिस्तान यसरी नै दुविधामा रह्यो भने त्यसको असर समग्र दक्षिण एसिया तथा इस्लामिक विश्वमा पर्नेछ। ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष २६ बुधबार, टेगुसिगाल्पा। हन्डुरसको क्यारिवियन समुद्रको तटीय क्षेत्रमा मङ्गलबार राति ७.८ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको समाचार छ। यस भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण भने प्रारम्भिक रुपमा केही पनि प्राप्त भएको छैन। मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको भए पनि विवरण प्राप्त नभएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। ... बाँकी अंश»